HOTBED "AGRONOM": CAAWIYE IFTIIN AH, ISAFGARAN OO JOOGTO AH - DHISMAYAASHA
Isticmaalka nooca aqalka dhirta lagu koriyo "Agronom" ayaa loo tixgelin karaa mid ka mid ah xalka ugu fiican marka la eego hufnaanta iyo sahlanaanta isticmaalka, iyo sidoo kale fududeyn iyo kalsoonida naqshadeynta.
Waxyaabahaan, oo ay weheliso isticmaalka qalabka casriga ah, waxay ku kala soocaan xarriiqyada lagu koriyo oo qulqulaya waxayna bixiyaan fursad hel natiijooyin wanaagsan marka koritaanka geedo ku yaala dhul furan.
Guga, marka isbeddel muhiim ah ee heerkulka iyo qoyaanka si fudud u burburin karaa geedo waaweyn oo koray, Glogshanka Agronom ilaaliyaan meherad wanaagsan oo wanaagsan aad uga fiican yahay wax kasta oo la heli karo oo sida badan loo isticmaalo bannaanka.
Qeexida aqalka dhirta lagu koriyo "Agronom"
Dhismaha aqalka dhirta lagu koriyo waa shaxda casriga casriga casriga ahtaas oo horey loogu lifaaqay alaabo daboolan.
Xalkan farsamo wuxuu ka dhigayaa "Agronom" alaab diyaar ah oo loo isticmaalo, uma baahna marka rakibidda iyo isticmaalka xirfadaha gaarka ah iyo aqoonta farsamada.
Ku filan fur furka iyo badeecada waa diyaar inaad isticmaasho. Qodbada qaabka gogolka ah ee qaabka qorraxdu ma muujinayaan isticmaalka saldhig, sidaas darteed aqallada dhirta lagu koriyo ayaa lagu rakibi karaa iyadoon wax tallaabooyin ah oo diyaarin ah meel kasta oo ku taal aagga magaalada.
Dhammaadka qaybaha dhammaadka alaabada daboolka waxaa loo isticmaalaa sidii loo kordhin lahaa, taas oo fududaynaysa naqshadeynta.
Dhererka aqalka dhirta lagu koriyo, waxay ku xiran tahay tirada duurka oo ay ku jiraan miisaanka, waxay noqon kartaa 4, 6 ama 8 mitir, ballaaran ee aqalka dhirta lagu koriyo ayaa ku filan si loo abuuro laba saddex sariirood oo ku dhow 1.2 m.
Dhererka wuxuu ku kala duwanaan karaa 0.7 ilaa 0.9 m. Iyadoo ku xiran shuruudaha shirka. Arrintan awgeed miisaanka wax soo saarku waa mid aad u yar. Sidaas darteed, aqalka dhirta lagu koriyo oo dhererkiisu yahay 4 m, miisaankiisu waa 2 kg.
Greenhouse "Agronom" waxaa loo isticmaali karaa hoyga xaaladaha deegaanka ee aan fiicneyn ee midhaha, khudradda, ubaxa iyo dhirta ornamental.
Aan ka fekerno faahfaahin dheeraad ah waxyaabaha ay ka samaysan yihiin aqalka dhirta lagu koriyo.
Sawir sawir leh aqalka dhirta lagu koriyo "Agronom":
Xuubka maskaxda waxaa laga sameeyaa tuubooyinka polyvinyl chloride (PVC) oo leh dhexroor 20 mm. Waxyaabahan wuxuu leeyahay qulqul ku filan iyo, isla markaa, waxay u oggolaaneysaa inay hagaajiyaan dhererka iyo dhererka dhismaha ee xadka qaarkood.
Balaashyo leh dherer 200 mm, oo sidoo kale ka samaysan PVC, ayaa lagu goynayaa tuubooyinka. Iyada oo ay caawinaad, "Agronomist" si ammaan ah ku xiran dhulka.
Qalabka caaga ah ayaa sidoo kale laga yaabaa in lagu daro xirmada, u oggolaan, haddii ay lagama maarmaan noqoto, si loo hagaajiyo waxyaabaha daboolan ee ku yaalla qulqulka booska kore. Si kastaba ha noqotee, isla shaqeyntu waa mid fudud samee maryaha size size.
Waa muhiim: Chloride Polyvinyl (PVC) waa qalab caafimaad ahaan gebi ahaanba amaan ah oo aan u keenin wax walxo waxyeelo leh deegaanka. Waxaa loo isticmaali jiray sanado badan, oo ay ku jiraan warshadaha cuntada (tusaale ahaan, soo saaridda suxuunta).
In lagu koriyo, Agrotex 42 dhar ah waxaa loo isticmaalaa alaabta daboolka ah. Si ka duwan filimka dabiiciga ah ee fiyuuska ah, maaddadani waxay leedahay tiro ka mid ah guryaha gaarka ah - it qoyaan iyo neefsasho, waxay kuu ogolaaneysaa inaad ilaaliso geedo ka yimaada isbeddel deg-deg ah heerkulka.
Qalabkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad abuurto microclimate wanaagsan ee dhirta.Wareegga daboolka waa 2.1 m.in, marin u ogolaanaya in ay xannibaan shaxda aqalka dhirta lagu koriyo "Agronomist".
Dhererka wuxuu ku xiran yahay dhererka alaabta, dariiqyada xaashida waxaa lagu cadaadiyaa dhulka marka la rakibo, kaas oo siinaya qaabdhismeedka dhismaha. Habka loo xirxiray dusha sare ee dabka ayaa u oggolaanaya maaddadu waa sahlan tahay in la mariyo hareeraha, kaas oo fududeeya shaqaynta dhirta inta lagu jiro jaridda dhirta ama waraabinta.
Caawimaad: "Agrotex 42" Microns 42-50 waa qalab kuleyl ah oo aan lagu duugin wax soo saarka Ruushka iyadoo la ilaalinayo shucaaca ultraviolet. Awooddeedu waxay u oggolaanaysaa isticmaalka aqalka dhirta lagu koriyo dhowr xilli.
Faa'iidooyinka muhiimka ah:
Hab fudud, isdhaafsasho iyo cimri dherer leh oo lagu darayo kharash yar;
Awood u leh inuu ku rakibo meel kasta oo aan adeegsan salka iyo dadaal yar;
Kordhinta kororka 50% marka la barbar dhigo beerista dhulka;
Ilaalinta joogtada ah ee saamaynaha deegaanka (xajmiga hoos udhaca illaa -5 ° C, dayactirka qoyaanka si fiican, ilaalinta cayayaanka iyo xayawaanka yaryar);
Iyadoo lagu saleynayo dhammaan kor ku xusan, waxaan ku soo gabagabeyn karnaa in "korontada" aqalka dhirta lagu koriyo warshadaha casriga ee casriga ahtaas oo si weyn u fududayn lahayd shaqada beerta nadaafadda iyo si weyn u kordhinta dhalidda.